I-Diploma yeSikolo samaBanga aPhakamileyo esi-15 esiPhezulu esiQinisekisiweyo kwi-Intanethi 2022
Idiploma yamabanga aphakamileyo yasimahla ekwi-intanethi ekuxoxwe ngayo kule bhlog yenzelwe abantu abadala kunye nolutsha olufuna ukugqiba idiploma yamabanga aphakamileyo kwi-intanethi.
Abantu bayaphuma kwisikolo esiphakamileyo ngenxa yezizathu ezinokuthi zibandakanye imiba yezemali, ngenxa yokunyuka kwemali yokufunda, ngakumbi e-US, abafundi bayayeka ukusebenza ukuze babonelele iimfuno zabo. Isenokubakho ngenxa yokuba bengenamdla esikolweni ngalo mzuzu, imiba yezempilo, okanye ngenxa yokuba befumanisa kunzima ukulandela ishedyuli yesiko lesiqhelo.
Kukho izizathu ezingakumbi zokuba abantu bashiye isikolo samabanga aphakamileyo kwaye akusekho sidingo sokuxoxa ngale micimbi, endaweni yoko ndibonisa isisombululo. Nokuba kwenzeka ntoni na engakhange ikwenze ufumane idiploma yamabanga aphakamileyo ngaphambili, le posti yebhlog izisa isisombululo.
Apha, ndiye ndadwelisa ndaza ndaxoxa ngediploma yamabanga aphakamileyo yasimahla ekwi-intanethi evunyiweyo ngamaziko emfundo afanelekileyo kubantu bayo yonke iminyaka ukubhalisa. Ndaphinda ndaya kuxoxa ngeediploma zesikolo samabanga aphakamileyo simahla kwi-intanethi ngaphandle kwendleko kubantu abadala, iidiploma zasimahla zamabanga aphakamileyo ngaphandle kwendleko zabantu abadala eTexas, kunye nee-FAQs zediploma zesikolo samabanga aphakamileyo zasimahla kwi-Intanethi.
Ngokungafaniyo nento osele uqhele ukuyenza, ezi klasi zediploma yamabanga aphakamileyo zenziwa kwi-Intanethi, ngokunikwa ukukhula kwemfundo ekwi-Intanethi, lukhetho lwendalo lwabantu abatsha namhlanje njengoko bekhulele kwilizwe eliqhutywa yitekhnoloji. Ke ngoko, kungcono ngakumbi ukulandela idiploma yamabanga aphakamileyo yasimahla kwi-intanethi, ayinaxinzelelo, uya kufunda ngexesha lakho (uzenzele) kunye nokulula, kwaye ikunika ukufikelela kulwazi oluninzi.
Ukuba awuyifumani indlela yemveli yokufunda enomdla kwaye ngenxa yesi sizathu uphumile kwisikolo samabanga aphakamileyo, idiploma yamabanga aphakamileyo yasimahla kwi-intanethi isisombululo kuwe. Izixhobo eziyimfuneko ekuthatheni inxaxheba kwimfundo ekwi-Intanethi zibandakanya iPC okanye ithebhulethi, uqhagamshelo oluzinzileyo lweWi-Fi, kunye nokuzimisela kwakho. Enye into enomdla ngemfundo ekwi-Intanethi kukuguquguquka kwayo, oko kukuthi, uya kufunda kwidiploma yakho yamabanga aphakamileyo ngaphandle kokubeka nayiphi na imiqobo kuxanduva lwakho.
Ke, ukuba ubusebenza kwaye ufuna ukubhalisela idiploma yamabanga aphakamileyo yasimahla kwi-Intanethi, awuyi kufuna ukuyeka ukusebenza, usaqala ukusebenza ngelixa ugqibezela inkqubo yakho yediploma yamabanga aphakamileyo kwi-intanethi.
1 I-FAQs malunga neDiploma yeSikolo samaBanga aPhakamileyo
1.1 Ngaba iidiploma zesikolo esiphakamileyo ezikwi-Intanethi zisemthethweni?
1.2 Ndingayifumana njani idiploma yam yamabanga aphakamileyo kwi-intanethi simahla?
1.3 Ngaba ungayifumana idiploma yamabanga aphakamileyo emva kweminyaka eyi-21?
1.4 Yeyiphi iminyaka yobudala ongaya kuyo kwisikolo samabanga aphakamileyo?
2 Idiploma yasimahla yesikolo esiphakamileyo kwi-Intanethi
2.1 1. Isikolo samabanga aphakamileyo iPenn Foster
2.2 2. Isikolo samaBanga aPhakamileyo iFranklin (FVHS)
2.3 3. Izikolo zasePinacle Charter
2.4 4. I-Arkansas Virtual Academy (i-ARVA)
2.5 5. Uqhagamshelo Academy
2.6 6. Isikolo seTexas seMpumelelo
2.7 7. Isikolo samabanga aphakamileyo iMizzou Academy kwi-Intanethi
2.8 8. Isikolo iMiddleton
2.9 9. ISikolo samaBanga aPhakamileyo saseLiberty
2.10 10. Isikolo samabanga aphakamileyo iOrion
3 IDiploma yeSikolo samaBanga aPhakamileyo simahla kwiNdleko ngaphandle kwaBantu abaDala
3.1 1. Isikolo seKeystone
3.2 2. Isikolo samaBanga aPhakamileyo i-Excel
3.3 3. IPark City eZimeleyo kwiSikolo samaBanga aPhakamileyo sabadala
3.4 4. Isikolo samabanga aphakamileyo iSmart Horizon Career kwi-Intanethi (i-COHS)
3.5 5. Isikolo samabanga aphakamileyo iJames Madison kwi-Intanethi
3.6 6. Isikolo i-Clintondale Virtual
4 Idiploma yasimahla yamabanga aphakamileyo yesikolo kwi-Intanethi ngaphandle kweNdleko yaBadala eTexas
I-FAQs malunga neDiploma yeSikolo samaBanga aPhakamileyo
Ngaba iidiploma zesikolo esiphakamileyo ezikwi-Intanethi zisemthethweni?
Idiploma yamabanga aphakamileyo efunyenwe kwi-Intanethi evela kwiziko eligunyazisiweyo isemthethweni kwaye iyinyani njengoko ifunyenwe kwisikolo semveli kwaye yamkelwe ziikholeji neeyunivesithi.
Ndingayifumana njani idiploma yam yamabanga aphakamileyo kwi-intanethi simahla?
Uyifumana phi kwaye phi idiploma yasimahla yamabanga aphakamileyo kwi-Intanethi kuxoxiwe ngayo kweli nqaku, qhubeka ufunda ukwazi-njani.
Ngaba ungayifumana idiploma yamabanga aphakamileyo emva kweminyaka eyi-21?
Kwiminyaka engama-21 nangaphezulu kuya kufuneka uye kwisikolo samabanga aphakamileyo sabadala ukuze ufumane idiploma yakho okanye ungazilungiselela kwaye uthathe uviwo lwe-GED.
Yeyiphi iminyaka yobudala ongaya kuyo kwisikolo samabanga aphakamileyo?
Ubudala obudala bokuya kwisikolo samabanga aphakamileyo buyahluka kwihlabathi liphela kodwa ihlala iphakathi kweminyaka engama-20 ukuya kwengama-26 ubudala, kuxhomekeke kwilizwe okanye kurhulumente.
Idiploma yasimahla yesikolo esiphakamileyo kwi-Intanethi
Iidiploma zasimahla zamabanga aphakamileyo ezili-15 ezikwi-intanethi ziya kukuthatha simahla ukuze zikuncede ekufumaneni idiploma encinci okanye engenayo imali yokuyisebenzisa. Ezi ziqonga ezibonakalayo zenzelwe ukubonelela ngemfundo esemgangathweni ngaphandle kobunzima bemali.
I-Penn Foster High School
Isikolo samabanga aphakamileyo iFranklin (FVHS)
I-Arkansas Virtual Academy (i-ARVA)
Isikolo samabanga aphakamileyo iMizzou Academy kwi-Intanethi
1. Isikolo samabanga aphakamileyo iPenn Foster
Eyasungulwa ngo-1890 kwaye ikhona eScranton, ePennsylvania, eUnited States, uPenn Foster yikholeji yangasese, eyenza inzuzo kwi-intanethi enika idiploma zesikolo esiphakamileyo kwi-intanethi. Yomibini ingingqi kunye nelizwe evunyelweyo kwiinkqubo zayo zokufunda kwi-Intanethi yi-DEAC, ubuhlakani bayo obuzinikeleyo kunye nenkxaso yenzelwe ukubonelela ngemfundo eyomeleleyo kunye namava abafundi akwi-intanethi.
Ikharikhulamu yesikolo esiphakamileyo sediploma sikaPenn Foster sineekhredithi ezili-16.5 ezisisiseko kwaye ukhetha iikhredithi ezi-5 zokukhetha, ukusukela kwizikhetho zemfundo, ezinje ngeNcwadi yaseMelika kunye neAlgebra, ukuya kwiinkqubo zoqeqesho lobugcisa ezinje ngombane, imibhobho yamanzi, ukuchwela, umncedisi wezilwanyana, ukhathalelo lwempilo, kunye nasekuqaleni kwikholeji.
Inkqubo yesikolo esiphakamileyo kwi-Intanethi inomthwalo opheleleyo wekhredithi ye-21.5 yeekhredithi kunye neendleko ze- $ 1,315 onokuthi uhlawule ngayo ngezavenge zenyanga nge- $ 49 encinci ngenyanga. Kukho izaphulelo ezinikezelweyo, isaphulelo esili- $ 96 sokuhlawulwa ngokuzenzekelayo kunye nesaphulelo se- $ 366 sentlawulo epheleleyo kubhaliso. Ukudluliselwa ngetyala okungama-16 kwamkelwe ngesaphulelo se- $ 45 kwisifundo ngasinye ngekhredithi eyamkelweyo yokudlulisa.
UPenn Foster amaqabane aphakamileyo esikolo kunye neZikolo eziKhathalela abafundi, iiDyunivesithi, kunye neJob Corps kwilizwe liphela, kwaye wamkelwa lelinye lamaqabane alo, iindleko zokufunda kwinkqubo yediploma yamabanga aphakamileyo inokugutyungelwa.
2. Isikolo samabanga aphakamileyo iFranklin Virtual (FVHS)
I-FVHS yasekwa ngonyaka ka-2010 njengesikolo sabucala esikwi-Intanethi esise-Tallahassee, eFlorida, kwaye sibonelela ngediploma yamabanga aphakamileyo yasimahla ekwi-intanethi eyenzelwe ulutsha nabantu abadala. Isikolo esiphakamileyo esibonakalayo samkelwe yi-AdvancED kwaye sibhaliswe kwiBhodi yeMfundo yaseFlorida.
Ikharityhulam yesikolo esiphakamileyo iyafana neyesiko kodwa iza nezinto ezongeziweyo zokuguquguquka kunye nazo zonke izibonelelo zokufunda kwi-Intanethi ezibandakanya ukufunda ekhayeni lakho, ukuzimela, kunye nabafundi banokwenza ngokwezifiso ikharityhulam ukuze ilingane nezifundo zabo iinjongo.
Kwisikolo iFranklin Virtual, abafundi babonelelwa ngemfundo esemgangathweni, eguqukayo, engabizi mali ukubanceda bafezekise iinjongo zabo zobuqu, zemfundo kunye nekhondo lomsebenzi. Imali yokufunda yenyanga yi- $ 330.
3. Izikolo zasePinacle Charter
Izikolo zePinnacle Charter zibonelela ngemfundo yasimahla yokufunda ukuze abafundi bafumane ukulungela iimfuno zabo zemfundo kwaye apha, ungabhalisela idiploma yamabanga aphakamileyo yasimahla kwi-Intanethi. Ubhaliso luvulelekile kubo bonke abafundi ukusuka kumaBakala 6 ukuya ku-12, yonke imihla kunyaka wesikolo. Isikolo samkelwe yi-AdvancED.
Ukubhalisa kwidiploma yesikolo esiphakamileyo sasePinacle kwi-Intanethi, uya kubonelelwa ngamava emfundo akumgangatho ophezulu, ikharityhulam ebalaseleyo, kunye nootitshala abaqeqeshwe kakuhle kubafundi nakwiintsapho abafuna amava aguquguqukayo kunakwisikolo semveli.
4. I-Arkansas Virtual Academy (i-ARVA)
I-Arkansas Virtual Academy sisikolo sikarhulumente esisisigxina se-intanethi sabafundi be-K-12 abazinikele ekukhuthazeni nasekuxhobiseni abafundi ngamava emfundo alungiselelwe iimfuno zomfundi ngamnye. Kwi-ARVA unokuthatha isigqibo sokuqalisa imfundo yakho ngokuthatha ukhetho olunamatyala amabini kunye nokufumana iikhredithi zekholeji.
I-virtual academy nayo inokhetho lwe-Career Prep olunika abafundi ithuba lokuphonononga ukhetho lomsebenzi kunye nokufumana umda wexesha elizayo ngokuthatha iikhosi eziphambili zemfundo kunye nokukhetha okujolise kwikhondo lomsebenzi kwicandelo elifunwa kakhulu. Banikezela ngezifundo zasimahla zasehlotyeni kunye neenkampu.
5. Uqhagamshelo Academy
Ukwamkelwa yiCognia kwaye kuyilelwe ziingcali zokufunda umgama, i-Connections Academy sisikolo sasesidlangalaleni esingahlawulelwayo apho ungafumana khona idiploma yamabanga aphakamileyo yasimahla kwi-Intanethi. Ikharityhulamu ilungiselela abafundi ukuba baqhubele phambili ebomini ngokubanika inkuthazo kunye nenkxaso abayifunayo ukuze bafumane ulwazi olusisiseko kunye nokuphuhlisa izakhono zobomi ezibalulekileyo.
I-Connections Academy yenye ye-diploma yesikolo esiphakamileyo samahhala kwi-intanethi kunye ne-100% ngaphandle kokufunda kodwa kufuneka uhlawule iindleko zesikolo eziqhelekileyo kunye nohambo lokuzithandela.
6. Isikolo seTexas seMpumelelo
Le yenye yediploma yamabanga aphakamileyo yasimahla ekwi-Intanethi ese-Arlington, eTexas, eUnited States, yamkelwe yi-AdvancED, yi-Arhente yezeMfundo yaseTexas, kunye neminye imibutho yoqinisekiso. Kukho iindlela zokufunda zabantu abadala kunye nolutsha kwaye uza kuvavanya izibonelelo zokufunda ezikwi-Intanethi ezibandakanya, ukuthatha iiklasi ngexesha elilungele wena, uxinzelelo oluncinci kunye noxinzelelo, kunye neshedyuli eguqukayo phakathi kwabanye.
Abafundi banokubonelela ngezifundo kuLawulo lweNgcaciso yezoShishino, uLawulo lwezoShishino, iNtshayelelo kwi-Akhawuntingi, kwiTekhnoloji yoMbane, nakwiPlumbing. Kwakhona, abafundi abaneekhredithi ze-0-11.5 bahlawula i-1,005 yeedola kwiinyanga ze-8 ngelixa abafundi abaneekhredithi ezingaphezulu kwe-11.5 behlawula i- $ 905 okanye i-105 yeedola ngenyanga kwiinyanga ezili-9.
7. Isikolo samabanga aphakamileyo iMizzou Academy kwi-Intanethi
IMizzou Academy sisikolo esamkelweyo kwi-Intanethi / kwisikolo esidibeneyo kwiYunivesithi yaseMissouri, ese-Columbia, eMissouri, e-US, kwaye sibonelela ngediploma yamabanga aphakamileyo yasimahla kwi-Intanethi, yamkelwe yi-AdvancED. Isikolo sibonelela ngezifundo ezinje ngesiNgesi / ubuGcisa boLwimi, iMathematika, iSayensi, iZifundo zeNtlalontle, ubuGcisa boBugcisa, ubuGcisa bobuGcisa, iMfundo yePhysical, iMpilo, iiLwimi zeHlabathi kunye nezoNyulo.
Kukho iikhosi ezingaphezu kwama-200, ubuhlakani bokusebenzisana ngokubambisana, kunye nokukhetha, kubafundi besikolo esiphakamileyo, iMizzou Academy inika isisombululo esigqibeleleyo sokuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo zabafundi, izikolo kunye nezithili.
Imali yokufunda yi- $ 500 kwikhosi nganye kodwa abahlali baseMissouri abamkelweyo kwinkqubo yediploma ekwi-intanethi banokulungela ukufumana isaphulelo se-50%.
8. Isikolo iMiddleton
KwiMiddleton Academy, ungabhalisela idiploma yamabanga aphakamileyo yasimahla kwi-intanethi kwaye ufumane uluhlu lwezakhono ezahlukeneyo kunye nolwazi oluya kukunceda ukhusele ikhondo lomsebenzi kwikamva. I-akhademi isekwe eWoodbridge, VA, kwaye yamkelwe yi-Advanced kunye ne-DEAC, isebenza njengesixhobo sabafundi kwizifundo ezikhokelwa ngutitshala, ezijolise kubafundi ezihlangabezana neMigangatho yokuSebenza kaRhulumente.
I-Middle Academy idibene nezikolo ezizimeleyo kunye nezenkolo, izikolo zikarhulumente kunye neenkqubo zomkhosi. Nokuba ufuna ukuthatha iiklasi ezimbalwa ezikwi-Intanethi okanye ufumane idiploma yamabanga aphakamileyo kwi-intanethi, i-academy ikulungele.
9. ISikolo samaBanga aPhakamileyo saseLiberty
Le yenye yediploma yamabanga aphakamileyo yasimahla ekwi-intanethi, ibekwe e-Battleboro, eVermont, e-United State, kwaye lukhetho olunokubakho kubantu abangakwazanga ukugqiba isikolo esiphakamileyo ngaphambili ebomini kunye nakwabafundi abakhoyo ngoku abadiniweyo yimfundo yesiNtu kwaye ufuna ukuphonononga iindlela eziguqukayo zokufunda.
Ungabhalisela iikhosi ezinje ngesiNgesi, iMathematika, iZifundo zeNtlalo, iSayensi, kunye nezifundo zoPhononongo kwaye nganye yezi nkqubo ifuna ukuba ubhatale imali eyi- $ 300.
Isikolo samabanga aphakamileyo iOrion sizinze eMidland, eTexas, eUnited States, kwaye sibonelela ngediploma yamabanga aphakamileyo yasimahla kwi-Intanethi kulutsha nakubantu abadala abanomdla wokuzibandakanya kwimowudi yokufunda yanamhlanje- ukufunda kwi-Intanethi. Isikolo samkelwe yi-ACTS kunye neCognia, babonelela ngezifundo ezingaphezu kwama-200 ezibandakanya ikharityhulam engqongqo, ukusuka kwizifundo ezizimeleyo ukuya kwi-AP kunye nokukhethwa kwamatyala amabini.
Abafundi banikwa imfundo ekumgangatho ophezulu kunye nendlela eguqukayo yokufunda kwindawo etyebileyo, exhasayo kwi-intanethi, kunye nokuvumela abafundi ukuba baququzelele ukufunda kwabo okusebenzayo.
Zonke ezi zikolo zivunyelwe ngumbutho ofanelekileyo kwaye ixhala lokufumana idiploma eyiyo akufuneki likukhathaze konke konke.
IDiploma yeSikolo samaBanga aPhakamileyo simahla kwiNdleko ngaphandle kwaBantu abaDala
Ngaba umdala kwaye awugqibanga kwisikolo samabanga aphakamileyo kwaye ufuna ukuyenza ngoku? Ewe, nazi iindaba ezimnandi. Ngokuqinisekileyo unokufumana idiploma yesikolo esiphakamileyo esivunyelweyo, kwaye ngeli xesha, kwi-Intanethi ngaphandle kwendleko. Icandelo lezemfundo liphucule kule minyaka ngenxa yokuyilwa kwe-intanethi, kwaye ngoku uninzi lwezikolo zisebenzise imo yokufunda kwi-Intanethi.
Ukuqhubela phambili kwetekhnoloji kwezemfundo kuyenze yanomdla ngakumbi, yamnandi, yadlamka, kwaye inika umdla xa kuthelekiswa nendlela yokufundisa kunye nokufunda kwesiko. Ke, ukuba wawukhe wakhathazwa yimiceli mngeni engenakukuvumela ukuba ugqibe isikolo esiphakamileyo ngaphambili, nali ithuba lokuwugqiba, kwaye ngeli xesha, uwugqibile ngesitayile.
Imodeli yokufunda ekwi-Intanethi iyabhetyebhetye, iyakhawuleza ukugqitywa, kwaye ayibizi, zizitayile ezininzi, akunjalo?
Ukudityaniswa apha ngezantsi yidiploma yamabanga aphakamileyo yasimahla kwi-Intanethi ngaphandle kwendleko zabantu abadala.
Isikolo samabanga aphakamileyo i-Excel
IPark City yeZikolo eziPhakamileyo zaBantu abaDala eziPhezulu
Isikolo samabanga aphakamileyo i-Smart Horizon Career (COHS)
Isikolo samabanga aphakamileyo iJames Madison kwi-Intanethi
Isikolo esibonakalayo saseClintondale
1. Isikolo seKeystone
Isikolo saseKeystone sinika idiploma yamabanga aphakamileyo yasimahla kwi-Intanethi ngaphandle kwendleko kubantu abadala, le nkqubo yenzelwe ukuba ibhetyebhetye kwaye incede abafundi bafezekise amaphupha abo kunye neenjongo zabo. Unokufunda izakhono ezitsha zokwenza ikhondo elitsha lomsebenzi okanye uthathe ikhondo lomsebenzi okhoyo kwinqanaba elilandelayo. Ikhosi inokugqitywa phakathi kweeveki ezisi-8 ukuya kwezi-12 kwaye inyuke ifike kwi-5-6 iikhredithi ngonyaka.
2. Isikolo samaBanga aPhakamileyo i-Excel
Isikolo samabanga aphakamileyo i-Excel sibonelela ngediploma yesikolo esiphakamileyo esamkelweyo kwi-intanethi ngaphandle kwendleko kubantu abadala, ungahambisa iikhredithi kwisikolo sakho samabanga aphakamileyo sangaphambili kwaye ugqibezele oko ubuqalisile, kwaye uphumelele kwiinyanga nje ezimbalwa. Iinkqubo zediploma zesikolo esiphakamileyo ezikwi-Intanethi zi-100% ngokuzenzela kwaye ungazigqiba ngesantya sakho.
3. IPark City eZimeleyo kwiSikolo samaBanga aPhakamileyo sabadala
Ukwamkelwa yi-AdvancEd kwaye ikwi-Scottsdale, eArizona, e-US, kwiSikolo samaBanga aPhakamileyo aBantu abaDala ePark ivulelekile kubemi base-US nakwabafundi abavela kwihlabathi liphela. Ukubhalisa apha kuya kukuvulela kumathuba amaninzi okuphucula ubuchule kunye nolwazi lwakho ngokufunda kwikhampasi ebonakalayo ukusuka kwintuthuzelo yekhaya lakho kunye nesantya sakho, ixesha kunye neshedyuli.
4. Isikolo samabanga aphakamileyo iSmart Horizon Career kwi-Intanethi (i-COHS)
Esi sikolo samabanga aphakamileyo kwi-Intanethi sinxulumana ne-Smart Horizons Career kwi-Intanethi yeMfundo kwaye sizinikele ekukhonzeni izigidi zabantu abadala kunye nolutsha oludala olungenazo iidiploma zamabanga aphakamileyo. Zonke iinkqubo ziyi-100% kwi-intanethi kwaye imodeli yekharityhulamu iqhubela phambili umfundi ngamnye ngokusekwe kwintsebenzo.
5. Isikolo samabanga aphakamileyo iJames Madison kwi-Intanethi
Kwisikolo samabanga aphakamileyo iJames Madison kwi-Intanethi ungabhalisela idiploma yasimahla yesikolo kwi-Intanethi ngaphandle kwendleko kubantu abadala, yamkelwe yi-DEAC, i-CHEA, kunye ne-AdvancED. Ungabhalisa kwiinkqubo zayo zediploma ezingama-24 nangaliphi na ixesha lonyaka. Idiploma yenzelwe ukulungiselela ikholeji, ukulungela umsebenzi ongcono, okanye ukugqiba isikolo sakho samabanga aphakamileyo.
6. Isikolo i-Clintondale Virtual
KwiClintondale Virtual School ungabhalisela idiploma yamabanga aphakamileyo yasimahla kwi-Intanethi ngaphandle kwendleko yabantu abadala enokugqitywa kwisithuba seeveki ezisi-8, yamkelwe yiAdvancEd. Iinkqubo ezibonelelwa apha zenzelwe kuphela abantu abadala abaneminyaka eyi-22 nangaphezulu, ukubhaliswa kwenziwa nangaliphi na ixesha lonyaka ukuzisebenzisa iiklasi zabo ezithunyelwe kwi-Intanethi nge-24/7 ukufikelela.
Idiploma yasimahla yamabanga aphakamileyo yesikolo kwi-Intanethi ngaphandle kweNdleko yaBadala eTexas
Ukuba umdala eTexas kwaye ufuna ukugqibezela idiploma yamabanga aphakamileyo kwi-intanethi, kanye ngokulula kwikhaya lakho, kwaye ngesantya sakho kufuneka ubhekise kwezi zikolo zingezantsi.
Isikolo seSitshixo kwi-Intanethi
Ikholeji yaseSan Antonio
Amanqanaba aBafundi beZikolo eziPhakamileyo abo bathiya iMathematics kunye neSayensi
Iinkqubo ezili-10 zasimahla zasimahla zeHlabathi zaBafundi beZikolo eziPhakamileyo
I-9 ephezulu yeSikolo samaBanga aPhakamileyo samaKatolika zabaFundi
Iingcebiso zokuFunda kwisikolo samabanga aphakamileyo phesheya
funda kwi-intanethi Iikhosi ze-Intanethi Izikolo zokuFundisa Simahla Funda iSakhono kwi-Intanethi izifundo zekhompyutha
idiploma yamabanga aphakamileyo yasimahla kwi-intanethiidiploma yamabanga aphakamileyo yasimahla eqinisekisiweyo kwi-Intanethiidiploma yamabanga aphakamileyo yasimahla kwi-intanethi yabantu abadala kwi-texasidiploma yasimahla yamabanga aphakamileyo kwi-intanethi akukho ndleko kubantu abadalaidiploma yasimahla yamabanga aphakamileyo kwi-intanethi akukho ndleko kubantu abadala kwi-texas
Post Previous:13 Izizathu Ezikhethekileyo Zokuba Imfundo Ibalulekile
Okulandelayo Post:Isatifikethi esiyi-12 esiPhezulu soLawulo loKwakha kwi-Intanethi